PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ကြေးဝါပုံနှိပ်တံတောင်ဆစ်တပ်ဆင်ခြင်း - စက်ရုံစျေး - Sunplast
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PEX-AL-PEX ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း > PEX-AL-PEX စာနယ်ဇင်းပစ္စည်းများ > PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်ကြေးဝါနှိပ်တံတောင်ဆစ်ပစ္စည်းများ
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်ကြေးဝါပုံနှိပ်တံတောင်ဆစ်တပ်ဆင်ခြင်းအရွယ်အစား - ၁၆ မီလီမီတာ၊ ၂၀ မီလီမီတာ၊ ၂၅mm နှင့် ၃၂ မီလီမီတာ။ သာလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုလက္ကားစျေးနှုန်း၊ SUNPLAST မှ Brass Press Elbow ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ကြေးဝါချည်တပ်ဆင်မှုဟုလည်းလူသိများသောကြေးဝါချုံ့သည့်ကိရိယာများသည်အလွှာပိုက်သို့မဟုတ် PEX-AL-PEX ပိုက်အတွက်အသုံးပြုသောလူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်သည်။ အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးအထူးကိရိယာများမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းကိုဖွင့်ထားသည့်သုံးစက်ကိရိယာနှစ်ခုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်း EPDM O- လက်စွပ်နှစ်ခုသည်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောရေစုပ်စက်ကိုပေးသည်။
SUNPLAST သည် ၁၆ မီလီမီတာမှ ၃၂ မီလီမီတာအထိသောကြေးဝါချုံ့ကိရိယာအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ယင်းတို့တွင်ဖိအားတံတောင်ဆစ်၊ တိုင်၊ အထီးနှင့်အမြှေးပါးချိတ်ဆက်ခြင်း၊
ထိပ်တန်းအရည်အသွေးသောကြေးဝါပစ္စည်းဖြစ်သော CW617, 58-2, CW602N, DZR, C48600 စသည်တို့။
ASTM က F 1281/1282, EN ISO21003
20ft ကွန်တိန်နာအတွက် 15-20 ရက်ခန့်, 40ft ကွန်တိန်နာရက်ပေါင်း 30-35 ရက်
PEX-AL-PEX ပိုက်အတွက်ကြေးနန်းစာနယ်ဇင်းတံတောင်ဆစ်ကိရိယာများသည် ၁၆ မီလီမီတာမှ ၃၂ မီလီမီတာအထိ၊ နီကယ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်း (သို့) မူရင်းကြေးဝါများကိုမျက်နှာပြင်အပြီးသတ်ပေးနိုင်သည်။
ကြေးဝါElbow Fittings ကိုနှိပ်ပါ
SUNPLAST PEX-AL-PEX multilayer pipe has been exporting to more than 15 countries & areas in worldwide, we have been buildingalong & good business relatအိုင်းယွန်းship with our customers. Thanks to the superior quality & best service, all customers are happy on us.
၁၅ နှစ်ကျော်တီထွင်ခဲ့သော Sunplast သည်ယခုအခါတရုတ်နိုင်ငံရှိအဝါရောင် PEX-AL-PEX multilayer pipe & fittings ၏ ဦး ဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူတစ် ဦး အဖြစ်လူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများနှင့်စက်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ထံမှတရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးနှင့်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်အခမဲ့ပါ။
hot Tags:: PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်၊ တရုတ်အတွက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စက်ရုံ၊ စက်ရုံများ၊ စျေးနှုန်း၊
ကြေးဝါစာနယ်ဇင်းတံတောင်ဆစ်Elbow ကိုနှိပ်ပါPEX-AL-PEX စာနယ်ဇင်းတံတောင်ဆစ်PEX စာနယ်ဇင်းတံတောင်ဆစ်PEX-AL-PEX တံတောင်ဆစ်ကြေးဝါစာနယ်ဇင်းကွေးPEX-AL-PEX စာနယ်ဇင်းကွေးPEX-AL-PEX ကွေးကြေးဝါစာနယ်ဇင်း FittingsPEX-AL-PEX စာနယ်ဇင်းပစ္စည်းများ
PEX-AL-Multilayer PEX ပိုက်အတွက်ကြေးဝါကိုနှိပ်ပါ Equal Tee
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက် Tee Redinging Tee Brass Press
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်ကြေးဝါ Press Press Coupling
PEX-AL-PEX အလွှာပိုက်အတွက်ကြေးဝါ Press အမျိုးသမီးစုံတွဲတစ်တွဲ